निर्मला हत्याका सय दिन: परिमाणमुखी उपलब्धी विहिन, अनुसन्धानमा डिएनएकै भर अभियुक्त भेटिएन - samabeshionline.com
निर्मला हत्याका सय दिन: परिमाणमुखी उपलब्धी विहिन, अनुसन्धानमा डिएनएकै भर अभियुक्त भेटिएन
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार १२:०२
कार्तिक १६, काठमाडौँ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको सय दिन हुँदा पनि प्रहरी अभियुक्तको नजिक पुग्न सकेको छैन । अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमा प्रमाण नष्ट हुँदा अभियुक्त पत्ता लाग्न नसकेको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । अन्य केही प्रहरीलाई विभागीय कारबाहीको तयारी भइरहेको छ । चरम लापरबाही गर्ने प्रहरीलाई कारबाही त भएको छ, तर पीडितको मूल प्रश्न (अभियुक्त खोइ ?) को कुनै जवाफ दिन सकेको छैन । समय बित्दै जाँदा प्रहरी अनुसन्धानमा थप प्रश्न उठ्दै गएका छन् ।
१० साउनमा साथी रोशनी बमको घरमा गएकी निर्मला भोलिपल्ट नजिकैको उखुबारीमा मृत भेटिएकी थिइन् । घटनास्थलको सुरक्षामै चुकेको प्रहरीले अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत गरेको देखिएन । तालिमप्राप्त कुकुरसमेत घटनास्थल नलगेको र मृतकको सुरुवाल पानीमा चोबल्ने तथा जलाउने गरेकाले प्रहरीमाथि सुरुदेखि शंका बढेको हो ।
किन गठन भएन विशेष अनुसन्धान टोली ?
निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरणमा आधा दर्जन छानबिन समिति गठन भए । अनुसन्धानमा प्रहरीले गरेको कमजोरी पत्ता लगाउन ती समिति गठन भएका हुन् । अनुसन्धानमा सघाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सिआइबीबाट थप प्रहरीहरू कञ्चनपुर पठाइएको छ । तर, अभियुक्त पत्ता लगाउन भने अहिलेसम्म कुनै पनि विशेष समिति गठन भएको छैन ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १२ मा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । कसुरको गम्भीरताका लागि विशेषज्ञसमेत राखेर विशेष टोली गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, बलात्कारपछि हत्याजस्तो गम्भीर विषयमा प्रहरी नेतृत्वले विशेष अनुसन्धान टोली गठनमा चासो दिएको छैन ।
सो दफामा विशेष टोलीको आवश्यकता भए माथिल्लो अधिकारी तथा प्रहरी महानिरीक्षकले विशेष टोली गठन गर्न पाउने प्रावधान छ । सो टोलीलाई अनुसन्धान अधिकृत सरहको अधिकार हुन्छ ।
विगतमा संगठित अपराधमा मात्र विशेष टोली गठन गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर, १ भदौदेखि लागू भएको अपराधसंहितामा अपराधको गम्भीरताका आधारमा विशेष टोली गठन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
प्रहरी बाहिरका विशेषज्ञसमेत राख्न सकिने प्रावधान कानुनमा छ । प्रहरी अनुसन्धानमा आशंका बढिरहेका वेला विज्ञ व्यक्तिलाई राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भए पनि प्रहरीले चासो दिएको छैन ।
१० साउन : साथी रोशनी बमको घरमा गएकी निर्मला सम्पर्कविहीन ।
११ साउन : बिहान करिब ९ बजे उखुबारीमा शव फेला ।
१४ साउन : अनुसन्धानका लागि सिआइबीबाट टोली परिचालन ।
४ भदौ : जिप्रका कञ्चनपुर र सिआइबी टोलीद्वारा दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक ।
५ भदौ : नक्कली अभियुक्त सार्वजनिक गरिएको भन्दै स्थानीयद्वारा आन्दोलन, प्रहरीको गोली लागेर एक घाइते ।
६ भदौ : कञ्चपुरका एसपी डिल्लीराज विष्ट, सिडिओ कुमार खड्का र जिप्रकाका असइ ज्ञानबहादुर सेठीको सरुवा ।
७ भदौ : गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हरिकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन, महेन्द्रनगरमा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय सनी खुनाको मृत्यु ।
९ भदौ : एसपी विष्ट निलम्बित ।
२६ भदौ : प्रमाण नपुगेपछि दिलीपसिंह विष्ट र बम दिदीबहिनी हिरासतमुक्त ।
३० भदौ : छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा पाँच प्रहरी (डिएसपीद्वय ज्ञानबहादुर सेठी, अंगुर जिसी, इन्स्पेक्टरद्वय जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का, असइ रामसिंह धामी) निलम्बित ।
९ असोज : छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन पेस ।
२१ असोज : हरिकुमार मैनाली नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक ।
८ कात्तिक : चरम लापरबाही गरेको आरोपमा तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय ।
१४ कात्तिक : थप चारजना व्यक्तिको डिएनएन परीक्षणका लागि नमुना संकलन ।
अनुसन्धानमा डिएनएकै भर
निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा प्रहरी अब डिएनएकै भर परेको छ । महेन्द्रनगरका थप चार शंकास्पद व्यक्तिको डिएनए परीक्षणका लागि बुधबार रगत लिइएको छ । तर, प्रहरीले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
उनीहरूको डिएनए मृतकको शरीरमा भेटिएको डिएनएको नमुनासँग मेल नभए थप धेरै व्यक्तिको परीक्षणको तयारी पनि भइरहेको छ । अनुसन्धानको प्रमुख प्रमाण डिएनए नै भएकाले धेरैको परीक्षणको तयारी गरिएको कञ्चनपुरका एसपी कुवेर कडायतले बताए । सुरुमा प्रहरीले चक्र बडू र दिलीपसिंह विष्टको डिएनए परीक्षण गरेको थियो । डिएनए रिपोर्ट नै नआई विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी विवादमा फसेको थियो ।
घटनामा प्रहरी नै संलग्न भएको आशंकामा तत्कालीन एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण र अर्का स्थानीय युवक आयुष विष्टको समेत डिएनए परीक्षण भएको थियो । तर, उनीहरूको डिएनए रिपोर्ट पनि मेल खाएन ।
धनगढी शहरको “पहिचान र चिनारी” क्रिकेट खेल बन्न थाले
नदीको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड
आफ्नो दूध बेचेर लाखौँ कमाउँछिन् यी महिला
मिस्टर एण्ड मिस फेस अफ द नेसनको अडिसन मङ्सिरमा
एक पैदलयात्रीको मृत्यु
बुद्धि तामाङ – इँटाभट्टादेखी चर्चित अभिनेतासम्म
भुनिमाया मल्लको उपचारार्थ कोरियाबाट आर्थिक सहयोग
सल्यानमा दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु
गायक संजय लामाको तामाङ सेलो गित घुम्नलाई आकोले बजार तातिदै (भिडियोसहित)
शरिरको कुनैपनि हड्डी सग्लो नभएको ११ वर्षकी आयुष्मा यस्तो भन्छिन् (भिडियो)